China Aluminium Checker Plate fekitori uye vagadziri | Kaichuang
Kaihua aruminiyamu yekugadzira aluminium grid ndiro, ine 5-bar Tsika Plate, Lentil-pateni-aluminium-ndiro, Pointer pateni aluminium ndiro dzakasiyana siyana, aruminiyamu grid ndiro inozivikanwawo sekutsika ndiro, pateni ndiro, duba ndiro, anti-skid ndiro, anti-skid ndiro, ndiro yedhaimani. Iyi ipuratifomu yealuminium sheet ine pateni kana mutsetse wakasimudzwa pamusoro pevhu kuwedzera kukakavara uye kudzikisa njodzi. Slip. Aluminium checkerboard ine yakanaka aesthetic zvivakwa uye inoshandiswa zvakanyanya senzvimbo yekurodha kana yekushongedza madziro zvinhu. 5 Bar Aluminium pani pani ine yakanaka ngura kuramba kumvura yegungwa pamwe nenzvimbo dzegungwa nemaindasitiri. Iyo zvakare ine yakanaka kwazvo weldability uye kutonhora kugadzikana. Iyo iri yepakati-simba kune yakakwira-simba chiwanikwa ine rakati kurei simba pane 5251, yepakati simba. Aluminium grating iri nani ngura inodzivirira uye yakareruka kupfuura zvimwe zvinhu uye inogona kugara kwemakore mazhinji, ichichengetedza kukosha kwayo kwakanyanya mushure mekutsiva. Iyi mhando yecheckboard iri mukuda kwakawanda kwekutengesa uye kwemaindasitiri pasi.
Aluminium checkerboard ine yakanakisa anti-skid maitiro, anoshandiswa zvakanyanya mufiriji, yepasi pevhu anti-skid, bhazi anti-skid skid, hombe yekutakura rori pasi uye nedzimwe nzvimbo. Kechipiri, 5052 aluminium checkerboard ine yakanaka anti-corrosion performance, iyo aruminiyamu cheki chebhodhi inoshandiswa munzvimbo nyoro, isina ngura, senge firiji, rori yefriji, anti-skid chikepe bhodhi, nezvimwewo. Ine imwe antioxidant basa nekuti haizo oxidize mukubata kwenguva refu nemvura. Yenguva refu yekubata nemvura haigone oxidize, saka ine imwe antioxidant basa. Nekuda kwechitarisiko chayo chesirivheri, inogona zvakare kushandiswa kungoro dzechikafu dzemafoni, iyo isiri chete isingatsvedza, asi zvakare inopa yakachena uye yakanaka inoonekwa kune vatengi.
Dzvanya kwandiri kuti uwane fekitori uye kurongedza ruzivo
Pashure: 7075 ALUMINUM SHEETI
Zvadaro: Dhaimani yakarongedzwa aruminiyamu pepa
3mm aruminiyamu checker ndiro mutengo
5 bar aluminium yekutarisa ndiro
aruminiyamu yekuongorora ndiro
checker ndiro vatengesi
China Checkered Aluminium Plate Mafekitori
China Yakaongororwa Aluminium Plate Fekitori
China Checkered Aluminium Plate Mugadziri
Anodized Aluminium Sheet Metal Vanopa, aruminiyamu yakarongedzwa pepa mutengo, aluminium alloy 6061 mutengo, 7050 aluminium pepa, Tsika Plate Aluminium Sheets, Yakachipa Aluminium Sheets,